Igbo, John: Lesson 008 - Izuzu nke Chineke pụtara ìhè n'ime mmụọ nke (Jọn 1:14-18) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 008 (The fullness of God in Christ)
14 Okwu ahu we ghọ anu-aru, bú madu, O we biri n'etiti ayi. Ayi huru otuto-Ya, bú otuto nke otù nwa-nwoke amuru nání ya, bú Nna nke Nna-ayi, nke juputara n'amara na ezi-okwu.
Ònye bụ Jizọs Kraịst? Ọ bụ ezi Chineke na ezigbo mmadụ. Onye nkwusa ozioma John na-egosi anyị ihe nzuzo a dị oke mkpa dị ka ụkpụrụ nke ozioma ya. Mgbe o kwuru banyere okwu nke okwu Chineke, ọ na-egosi anyị ntọala nke ozi ya. Amaokwu 14 bụ isi ihe niile na-esonụ. Ọ bụrụ na ị ghọtara pearl a nke mmụọ na ihe ọ pụtara, ị ga-enweta nghọta miri emi banyere ihe ọmụma nke isi na-esonụ.Ọdịdị nke Kraịst bụ ihe dị iche na nmalite ime mmụọ anyị. Anyị niile nwere ahụ ma mụọ nna na nne. N'ikpeazụ, okwu nke Oziọma ahụ ruru anyị ma mepụta ndụ ebighi ebi n'ime anyị. Otú ọ dị, ọ bụghị nna nke ụwa ka Kraịst mụrụ, kama okwu Chineke bịakwutere Meri site n'ọnụ mmụọ ozi, bụ onye gwara ya, sị, "Mmụọ Nsọ ga-abịakwasị gị, ike nke Onye Kasị Elu ga-ekpuchikwa gị: ya mere, kwa, onye ahu di nsọ nke agāmuru, agākpọ Ya Ọkpara Chineke. (Luk 1:35). Mgbe nwa agbọghọ a na-amaghị nwoke nabatara ozi ọma a site n'okwukwe, ọ hụrụ embryo dị n'ime akpa nwa ya, nke Mmụọ Nsọ jikọtara na ọbara mmadụ. Nke ahụ bụ otú Chineke si ghọọ mmadụ.
Echiche anyị na-akwụsị tupu eziokwu a. Ọdịdị ndụ enweghị ike ịkọwa ihe nzuzo a. Ahụhụ mmadụ enweghị ike ịghọta ya. Ụfọdụ ndị ọkà mmụta okpukpe na-agbalị ime ka ike ọmụmụ ọmụmụ Kraịst ghara ịdị irè site n'ikwu na ọ bụ nanị na ọ pụtara n'anụ ahụ n'ebughị ụzọ nwee anụ ahụ nke na-enwe mmetụ na mwute. Otú ọ dị, anyị na-ekwupụta na Kraịst bụ mmadụ zuru oke na Chineke zuru oke n'otu oge ahụ.Ọdịdị nke Kraist bụ nkọwa kachasị maka ọmụmụ a dị ebube. Ọkpara ebighi ebi nke Chineke, onye sitere na Nna tupu oge nile, weere òkè n'an'iru aru ayi n'enweghi nmehie, n'ihi na Mo Nso nime ya meriri ochicho nile megide nmehie. Ya bu na Jisos bu nani mmadu bu onye biri na ntuputa na idi ocha, n'enweghi ure.
Ọkpara Chineke gbakọrọ aka na ndị nnupụisi, ndị na-enweghị nchegbu na ndị ọjọọ, ndị niile gafere. Ot'odi, odi ndu ebighebi, n'enweghi ike inwu n'ihi odidi ya. N'agbanyeghi na ebuli ya elu, o huru anyi n'anya ma haputa ebube ya nke di na ya. Ọ ghọrọ onye na ụdị anyị ma ghọta ọnọdụ anyị n'ụzọ zuru oke. Na mgbu ya mụtara nrubeisi zuru oke. N'ụzọ dị otú a, ọ ghọrọ ọmịiko n'ezie. Ọ jụghị anyị, ndị ọjọọ. Kraist ghọrọ mmadu iji duru anyi gakwuru Chineke.Ahụ nke Kraịst yiri ụlọikwuu ahụ n'Agba Ochie ebe Chineke zutere ndị mmadụ. Chineke nọ nime Kraist ma kwuputa onwe ya nye ndi mmadu n'udi madu, ebe chi nile di. Dị ka ihe odide Grik si kwuo, Jọn kwuru n'ezie na ya "nọ n'etiti anyị". Nke a pụtara na ọ wughị ụlọ obibi na-adịgide adịgide iji nọgide na anyị mgbe nile n'ụwa, ma na ọ bi na Bedouins bi n'ụlọikwuu ha ruo oge dị mkpirikpi. Ekem enye ada tent esie onyụn̄ ada enye aka ebiet efen. N'otu ụzọ ahụ, Kraịst nọ n'etiti anyị ruo obere oge tupu ya alaghachi n'eluigwe.
Ndịozi ahụ na-agba akaebe na ha hụrụ otuto nke Kraịst. Akaebe ha bụ ihe mkpuchi na ọṅụ. Ha bụ ndị akaebe anya na ọnụnọ nke Ọkpara Chineke n'anụ ahụ. Okwukwe ha meghere anya ha iji mata ima, ndidi, ịdị umeala n'obi, iguzosi ike n'ihe na chi nke Jizọs. N'ịdị ọcha ya, ha hụrụ Chineke n'onwe ya. Okwu ahụ, "ebube ya" n'Agba Ochie na-egosi nchịkọta nke àgwà nile nke Chineke. Jọn onyeozi ji obi ike debe ihe niile a Jizọs kwuru n'àmà ya. Ọ ghọtara na ya dị ebube na ịma mma ya na ịdị ukwuu ya.Site n'ike mmụọ nsọ, Jọn kpọrọ Chineke Nna na Jizọs Ọkpara. Enweghị ihe ga-agbanahụ usoro ndị a. Mmụọ nke Mmụọ Nsọ na-eweda ákwà mkpuchi nke kpuchiri aha Chineke, na-emesi anyị obi ike na Onye Nsọ dị ebighi ebi, Onye Okike dị ike bụ Nna, nweekwa Ọkpara dị nsọ, dị ebube na ebighị ebi, jupụtara n'ịhụnanya. Chineke abughi nani onye ikpe na-emeri emeri ma jiri ike mee ihe. O nwere ọmịiko, dị nro ma nwee ndidi, otú ahụkwa ka Ọkpara Ya dị. Site n'inyere Nna na Okpara aka, ayi ghotara isi nke agba ohu. Onye nāhu Ọkpara ahu nāhu Nna-Ya. Ngosipụta a gbanwere onyinyo nke Chineke dị n'okpukpe ndị ọzọ ma meghee anya anyị maka afọ nke ịhụnanya.
Ichọrọ ịma Chineke? Mgbe ahụ gụọ ndụ Kraịst! Gịnị ka ndị ahụ na-eso ụzọ hụrụ na Jizọs? Kedu ihe nchịkọta nke àmà ha? Ha hụrụ na Chineke nwere ịhụnanya na amara na eziokwu. Chee echiche banyere ihe ato ato a ka i na-ekpe ekpere ma i ga-enwe mmetuta nke ebube Chineke nke di n'ime Kraist. Ọ na-abịakwute anyị n'ịgwọ amara na-erughịrị anyị. Anyị niile bụ ndị ikpe mara; ọ dịghị onye n'ime anyị dị mma. Ọbịbịa ya, anyị rụrụ arụ dị ka anyị bụ, amara amara. Ihere na-akpọ anyị ụmụnne ya, o mere ka anyị dị ọcha, doo anyị nsọ ma mee ka anyị dị ọhụrụ, ọ mejukwara anyị na mmụọ ya. Ọ bụghị ọrụ nzọpụta ndị a "amara na amara"? Ọbụna karịa nke a: anyị enwetawo ikike ọhụrụ, n'ihi na Kraist kụrụ anyị n'ime amara ya ka o nwee ikike ịghọ ụmụ Chineke. Ozi nke amara abụghị aghụghọ ma ọ bụ iche n'echiche mana ikike ọhụrụ. Ihe omuma ahu bu ihe akaebe nke n'eziokwu nke oru Chineke, nke neme ka ayi no nime nzoputa ya. Grace bụ ihe ndabere nke okwukwe anyị.
EKPERE: Anyị na-akpọ isiala nye gị Nwa nke anụ ụlọ, dị ka ndị ọzụzụ atụrụ na ndị Magi nọ na Betlehem. Ị bụ Chineke n'anụ ahụ na-abịakwute anyị, ihere adịghị akpọ gị ụmụnna. Ìhè gị na-enwu n'ọchịchịrị. Kpoo obi m na-adịghị ọcha, ka o wee daba adaba ịghọ anụ ụlọ ebighi ebi maka gị. Mụ na ndị kwere ekwe niile m na-eto gị, n'ihi na ebube gị aghọwo ahụ dị umeala. Anyị na-arịọ gị ka ọtụtụ n'ime ndị ọjọọ ndị bi n'ógbè anyị nwere ike ịhụ ikike ọhụrụ ha ma nata gị.
Gịnị ka ịbụ onye Kraịst pụtara?